Wararka - Horumarinta Cawska Artifishalka ah ee Nolosha Dadka
Marka la barbardhigo cawska dabiiciga ah, cawska macmalka ah waxaa lagu sameeyaa habab gacmeed sida diyaarinta maaddada, sawir qaadista, maroojinta, tufting, dhejinta, qalajinta iyo qallajinta, kuwaas oo inta badan loo qaybiyay cawska isboortiga, cowska xilliga firaaqada iyo cowska waxqabadka badan. Markii hore, badeecooyinka cawska ee macmalka ah ayaa aad u adkaa oo aan waxtar lahayn oo dad yar ayaa diyaar u ahaa inay ku isticmaalaan aagaggooda dibedda. Si kastaba ha noqotee, horumarka tikniyoolajiyadda ayaa horseeday isbeddello waaweyn. Cawska macmalka ah wuxuu umuuqdaa sida cawska dhabta ah, oo ay aad ujecelyihiin dad aad iyo aad u tiro badan. Marka la barbardhigo cawska dabiiciga ah, cawska macmalka ah wuxuu leeyahay faa'iidooyin iyo faa'iidooyin badan.
1. Cawska macmalka ah waxaa lagu rakibi karaa sagxadaha aasaasiga ah ee kala duwan, iyadoo shuruudaha tayada aasaasiga u hooseeyo, aan laga baqayn dildilaaca, aan laga baqaynin finka iyo hoos u dhigista, waana mid fudud oo dhaqaale leh.
2. Cawska macmalka ah wuxuu leeyahay dayactir fudud iyo kharash yar oo dayactir ah. Waxaa lagu dhaqi karaa biyo saafi ah si looga saaro wasakhda, waxayna leedahay astaamo aan hoos u dhac lahayn iyo aan lahayn cillad.
3. Waxay umuuqataa caws dhab ah waxayna leedahay dareen cagaaran; Noocyadu way dhammaystiran yihiin, dhererka cawskuna waa lagu dooran karaa iyadoo loo eegayo isticmaalka dhabta ah.
4. Dhulka isboortiga ee cawska macmalka ah wuxuu leeyahay qaab dhismeed qurux badan, heer isticmaalkiisu sarreeyo, nolol dheer oo adeeg ah oo ka badan 10 sano, adkeysi iyo dayactir fudud, waxaana loo isticmaali karaa si isdaba-joog ah saacad kasta.
5. Maaddada cawska ee macmalka ah ayaa deegaanka u wanaagsan, oo alaabtii dhammaatay ayaa la dhisay. Muddada dhismuhu waa mid go'an oo gaaban, tayada way fududahay in la barto, aqbalitaankuna waa sahlan yahay iyada oo aan aqoon badan oo xirfadeed lahayn.
Dhul daaqsimeedka macmalka ah wuxuu leeyahay astaamaha heerka isticmaalka sare, cabbitaanka shoogga, buuq la'aan, nabadgelyo la'aan, sun lahayn, dabacsanaanta, ololka oo dib udhaca wanaagsan, iwm. Aad ayey ugu habboon tahay in loo isticmaalo iskuulada waana hawsha hadda jirta, tababarka iyo goobta tartanka.
Calaamadeynta si toos ah ayaa loo soo uruuriyay, sidaa darteed looma baahna in laga walwalo calaamadeynta soo noqnoqda, dayactirkuna waa sahlan yahay, iyadoo ku dhowaad aan lahayn kharash dayactir dambe.
S ： www.systurf.com